Magacaabistaydii iyo maagistaydii: Laba Isku Lamaanaa Qaybtii 15aad Boobe Yuusuf Ducaale – Araweelo News Network (Archive)
Aynu dib ugu noqonno raad-raaceennii taariikheed. Aynu ku noqonno magaalada Harar ama Adariba, hadba sida aad u taqaannaan. Waa Shirweynihii 5aad ee SNM oo ahaa mid aan caadi ahayn. Maxaa ka dhigay mid aan caadi ahayn? Shirweynihii 4aad ee caadiga ahaa ee SNM wuxu
ku qabsoomay magaalada Jigjiga 6dii bishii Ogos 1984kii. Sidaa darteed Shirweynaha 5aad ee caadiga ahi waxay ahayd in uu qabsoomo bishii Sebetember 1986kii. Si aan dastuuri ahayn ayaa shir habaqle ah loogu qabtay magaalada Awaare. Waa bishii Juun 1986kii oo ku beegnayd beryihii Siyaad Barre shilka baabuur galay ee lagu daweynayay dalka Sucuudiga.
Magacaabistaydii iyo Maagistaydii: Laba isku Lammaanaa Qormadii 16aad Boobe Yuusuf Ducaale